राष्ट्रकवि घिमिरेको राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिँदै – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/राष्ट्रकवि घिमिरेको राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिँदै
३ भदौ, काठमाडौं ।राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको आज राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिने भएको छ । घिमिरेको १०१ वर्षको उमेरमा मंगलबार साँझ ५ बजेर ५५ मिनेटमा काठमाडौंको कपुरधारास्थित आफ्नै घरमा निधन भएको थियो ।
घिमिरेको पार्थिव शरीरमा बिहान १० बजे उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले राष्ट्रिय झण्डा ओढाएर सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ ।घिमिरेको जन्म वि. सं. १९७६ असोज ७ गते लमजुङको पुस्तन गाउँमा भएको थियो । घिमिरे स्वच्छन्दतावादी भावधारा र परिष्कारवादी शैली अपनाएर साहित्य सिर्जना गर्ने साहित्यकारका रूपमा चिनिन्छन् । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा पछिका सर्वाधिक लोकप्रिय स्रष्टाका रूपमा राष्ट्रकवि घिमिरेलाई लिइन्छ । ३ भदौ, काठमाडौं ।राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको आज राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिने भएको छ । घिमिरेको १०१ वर्षको उमेरमा मंगलबार साँझ ५ बजेर ५५ मिनेटमा काठमाडौंको कपुरधारास्थित आफ्नै घरमा निधन भएको थियो ।
घिमिरेको पार्थिव शरीरमा बिहान १० बजे उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले राष्ट्रिय झण्डा ओढाएर सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ ।घिमिरेको जन्म वि. सं. १९७६ असोज ७ गते लमजुङको पुस्तन गाउँमा भएको थियो । घिमिरे स्वच्छन्दतावादी भावधारा र परिष्कारवादी शैली अपनाएर साहित्य सिर्जना गर्ने साहित्यकारका रूपमा चिनिन्छन् । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा पछिका सर्वाधिक लोकप्रिय स्रष्टाका रूपमा राष्ट्रकवि घिमिरेलाई लिइन्छ ।
सुनको मूल्य अहिले सम्मकै उच्च, प्रतितोला कति पुग्यो ?
पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा कोरोनाबाट यति धेरै कोरोना संक्रमितहरुले ज्यान गुमाए ।